Warshad Laser Jajaban - Shiinaha Soosaarayaasha Co2 Laser Qaybiyeyaal, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
Tayada Sare Portable Co2 F ...
Jajabka Siilka Co2 Laser ...
1060nm 4 Qabashada Diode Lase ...
808nm Diode Laser Timaha Remo ...
Madaxa iskaanka Smart, si fudud u hawl iyo waqti badbaadin. Madax qalliin oo inta badan loo isticmaalo jarista maqaarka maqaarka iyo ciddiyaha soo dhaca, nevus-ka isku-xidhka ah iyo nevus-ka intradermal nevus iwm. Madax xanuunka haweenka1, 360 ° iyo daaweynta 90 °, Dahaarka jirka ee 'Gold Plated vertebral body laser' wuxuu leeyahay muuqaal aad u sarreeya iyo saameyn daaweyn oo ka wanaagsan. Madax xanuunka dumarka 2, daaweynta faruuryaha cambarka siilka, Labia oo caddeeya ka saarista Melanin. Qalabka duulimaadka ee banaanka wuxuu isticmaalaa daawaha birta oo tayo sare leh, 24 biinanka dahaarka leh ee dahabiga ah gudaha.
Jajabka Co2 Laser siilka Adkaynta Laser Medical Mashiinka Mashiinka Nabarrada Nabarrada Laser Finanka
Madaxa iskaanka Smart, si fudud u hawl iyo waqti badbaadin. Madax qalliin oo inta badan loo isticmaalo jarista maqaarka maqaarka iyo ciddiyaha soo dhaca, nevus-ka isku-xidhka ah iyo nevus-ka intradermal nevus iwm. Madax xanuunka haweenka1, 360 ° iyo daaweynta 90 °, Dahaarka jirka ee 'Gold Plated vertebral body laser' wuxuu leeyahay muuqaal aad u sarreeya iyo saameyn daaweyn oo ka wanaagsan. Madax xanuunka dumarka 2, daaweynta faruuryaha cambarka siilka, Labia oo caddeeya ka saarista Melanin. Qalabka duulimaadka ee dibedda wuxuu adeegsadaa daawaha birta oo tayo sare leh, 24 dahab ah oo dhejis ah oo dhejis ah oo gudaha ah.
Madaxa iskaanka sirdoonka, shaqada muhiimka ah ee cusub, riix M key si aad u badasho sawirada, mudo dheer seddex ilbiriqsi si aad isugu diyaariso, '+' waxay kordhin kartaa cabirka sawirka, iyo '-' waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo cabirka sawirka. Ku habboon macaamiisha inay shaqeeyaan. Laser emitter: Laser laga keeno USA, Awoodda ugu sarreysa waxay gaari kartaa 100W, Nolosha adeegga: Saacadaha 2000. Qeybta cusub ee dimmer-ka waa la mugdi karaa iyada oo aan la kala qaadin mashiinka. 7 cudud wadajir ah oo isku xiran, hawlgal 360 ah, oo si weyn u yareynaya tamarta ...